MD, Cali Cabdi Awaare oo ka tacsiyeyay geeridii wakiilkii SBC ee Qardho – SBC
MD, Cali Cabdi Awaare oo ka tacsiyeyay geeridii wakiilkii SBC ee Qardho
Posted by Webmaster on July 29, 2016 Comments
Mulkiilaha Hay’adda warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC Mudane Cali Cabdi Awaare ayaa tacsi ka diray Geeridii ku timid Naxariistii janno ilaahey ha siiyee Wakiil wareedkii Warbaahinta SBC ee Magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar Maxamuud C/laahi Faarax oo dhowaan xaalad caafimaad ugu geeriyooday magaalada Hargeysa xarunta Soomaaliland.
Mudane Awaare ayaa tacsida u diray dhamaan Ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Wariye Marxuum Maxamuud C/laahi Faarax, iyo Asxaabtii uu ka geeriyooday oo ay ka mid yihiin bahda ay shaqo wadaaga ahaayeen ee Hay’adda warbaahinta Soomaaliyed ee SBC.
Awaare ayaa ugu duceeyay dhamaan dadkaasi in uu samir iyo iimaan ilaahey ka siiyo geerida Marxuumka, isagana u rajeeyay in alle uu naxariistiisa janno siiyo.
Sidoo kale Maamulka iyo shaqaalaha Hay’adda warbaahinta SBC ayaa iyaguna dhankooda u diray Tacsi Ehelkii Wariye Talaabo, iyagoo alle uga baryay samir iyo Iimaan in uu ka siiyo.
Gudoomiyaha Ururka saxafiyiinta Puntland ee Map Mudane Faysal Khaliif Barre ayaa dhankiisa u diray tacsi bahda warbaahinta SBC, Ehelkii iyo asxaabtii Magaalada Qardho ee uu ka geeriyooday Wariye Maxamuud C/laahi, isagana ugu duceeyay Janadii fardowsa.
Ilaahey Ha u naxariistee wariye Maxamuud Talaabo ayaa xanuun ugu geeriyooday dhowaan magaalada Hargeysa halkaas oo uu u tagay xaalad caafimaad, waxaana uu ahaa nin muda dheer gacanta ku hayay Xarunta Warbaahinta SBC ee magaalada Qardho, isagoo in mudo ah ku howlanaa ka shaqeynta iyo casriyeynta xafiiska SBC ee magaaladaasi Qardho.
Dhamaan intii uu ka baxay waxan leenahay Ilahay ha idinka siiyo samir iyo iimaan isagana ha ugu deeqo janatul firdowsa.